WARBIXIN: Akhriso Dhamaan Kulamada Baaqiga U Ah Lixda Kooxood Ee Waa Wayn Ee Premier League Iyo Kulamada Go'aamin Kara Ku Guulaysiga Koobka Iyo Kaalinta Afraad. - Gool24.Net
WARBIXIN: Akhriso Dhamaan Kulamada Baaqiga U Ah Lixda Kooxood Ee Waa Wayn Ee Premier League Iyo Kulamada Go’aamin Kara Ku Guulaysiga Koobka Iyo Kaalinta Afraad.
Tartanka horyaalka Ingiriiska ee Premier league ayaa galay heerkii ugu xiisaha badnaa waxaana xili ciyaareedkan si buuxda u muuqata in uu gabi ahaanba ka duwanaan doono sidii uu soo ahaa xili ciyaareedyadii la soo dhaafay iyada oo la filayo in maalinta ugu danbaysa xili ciyaareedkan uu sii socon doono tartanka koobka Premier league.
Sida ay hadda u taagan tahay waxa uu koobka Premier league dhex yaalaa saddex kooxood oo ku guulaysan kara inkasta oo ay kala badan yihiin fursadaha ay haystaan laakiin Liverpool, Manchester City iyo Tottenham waxaa si sahlan loogu tilmaami karaa saddexda kooxood ee koobka Premier league ku tartamaya iyada oo ay sababo aan sharixi doonaa jiraan.
Kulamadii todobaadkan la soo ciyaaray ee Premier league wax badan ayaa laga bartay waxaana si cad u muuqatay in saadaal kasta oo la bixiyaa ay waqti kooban isku badali karto balse aragtida guud ee tartanka koobka Premier League ayayna waxba iska badalin.
Shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa falanqayn khaas ah oo aanu ku samaynay tartanka koobka Premier league ee u dhexeeya kooxaha Liverpool, Manchester City iyo Tottenham si la mid ah dagaalka saddex geesoodka ah ee Man United, Chelsea iyo Arsenal ee kaalinta afraad ee Champions League loogu soo baxayo.
Inta aynu warbixintan ku jirno waxaad si buuxda ugaga bogan doontaa fursada ay haystaan saddexda kooxood ee koobka Premier league ku tartamaya iyo waliba fursad walba oo ay heli karaan saddexda kooxood ee ilaa hadda kaalinta afraad ee Premier league ku tartamaya.
Aan ku horayno dagaalka xoogan ee loogu jiro kaalinta afraad ee Premier league halkaas oo ay kooxaha Man United, Chelsea iyo Arsenal jilbaha isku darayaan isla markaana ay ilaa dhamaadka xili ciyaareedkan sii wadi karaan fursada ay Champions league ugu soo bixi karaan.
1-Rajada Manchester United Ee Kaalinta Afraad Iyo Wacdarihii Ole Gunnar Solskjaer Uu Khaarajiyay Chelsea iyo Arsenal:
Manchester United waxay bishii December ku jirtay heer ay quus ka ahayd in ay xili ciyaareedkan ku dhamaysan karto afarta kaalmood ee sare wuxuuna waqtigii ugu danbeeyay ee Jose Mourinho uu saxaafada u sheegay in ay kaalinta afraad ugu soo bixi karaan dagaal aanu markaas qeexin sida uu noqon karo.
Waxay Man United ahayd koox liidatay oo aan lahayn ruux iyo lugo ay ku dhaqaaqdo waxaana si sahlan looga dhalinayay goolal aad u tiro badan oo xataa 17 kii kulan ee hore looga soo dhalyay goolal ka badan guud ahaan intii xili ciyaareedkii hore laga dhaliyay.
Laakiin xaaladu hal mar oo kaliya ayay isku badashay dhinaca wanaagsan, waxayna United yeelatay tababare hadda lagau xusuusanayo Sir Alex Ferguson kaas oo maalintii ay maamulka Man United sida ku meel gaadhka ah ugu dhawaaqeen loo arkayay go’aan fashil ah balse cid walba oo qalad ka fahantay waxa uu Ole Gunnar hadda ka dhigay mid candhuuftiisa dib u liqay.
Manchester United ayaa kaalinta lixaad ku jirtay maalintii uu Ole Gunnar la wareegay xilka Old Trafford waxayna 9 dhibcood ka hooseeyeen Chelsea oo kaalinta afraad ku jirtay waxayna sidoo kale Arsenal oo kaalinta 5 aad ku jirtay ay ka hooseeyeen 8 dhibcood laakiin hadda Man United waxay si layaableh ugu jirtaa kaalinta afraad.
Man United ayaa kaalinta afraad ugu jirta 51 dhibcood laakiin wali shaqada ay Red Devils soo waday waxba kama dhawa waxayna min hal dhibic oo kaliya ka saraysaa kooxaha ay gadaal u riixday ee Chelsea iyo Arsenal oo min 50 dhibcood ugu jira kaalinta shanaad iyo lixaad sida ay u kala horeeyaan.
Manchester United waxaa u hadhsan kulamo si dhab ah u go’aamin doona haddii ay kaalinta afraad ku dhamaysan doonto waxaana kulamadan ka mid ah kan ugu soo horeeya ee ay Liverpool la ciyaari doonaan, laakiin kulamada ay Man United la yeelan doonto kooxaha Chelsea iyo Arsenal ayaa saamaynta ugu wayn yeelan doona.
Kulamada Manchester United Baaqiga Uga Ah Premier league Ee Ay Kaalinta Afraad Ku Go’aamin Karaan:
Manchester United vs Liverpool (Minan)
Crystal Palace vs Manchester United (Marti)
Manchester United vs Southampton (Minan)
Arsenal vs Manchester United (marti)
Manchester United vs Man City (Minan)
Manchester United vs Watford (Minan)
Wolves vs Manchester United (Marti)
Manchester United vs West Ham (Minan)
Everton vs Manchester United (Marti)
Manchester United vs Chelsea (Minan)
Huddersfield vs Manchester United (Marti)
Manchester United vs Cardiff City (Minan)
Kulamadan ayaa si rasmi ah u go’aamin doona haddii ay Man United heli doonto dhibco ku filan in ay kaalinta afraad ku dhamaysan doonto waxaana sidoo kale saamayn ku yeelan kara natiijooyinka kulamada ay ciyaari doonaan Chelsea iyo Arsenal.
Riix 2,3, 4, 5 Si aad wax walba oo xogta kulamada kooxahan uga bogato.